Dreame T20, mpanadio banga tànana manara-penitra avo lenta sy mahomby [Famerenana] | Gadget News
Dreame T20, mpanadio banga tànana avo lenta sy mahomby [Fandinihana]
Miguel Hernandez | 22/11/2021 12:00 | General, hevitra
Izay fitaovana ara-teknolojia mikendry ny hanamora ny fiainanao dia raisina an-tanan-droa ao amin'ny Actualidad Gadget, ary tsy azo atao raha tsy izany miaraka amin'ny mpanadio banga entin-tanana, vokatra iray misolo toerana amin'ny mpanadio banga robot ary noho ny asany sy ny tombontsoany tsirairay dia lasa ny fotoana tsara kokoa. vokatry ny faniriana.
Fantaro miaraka aminay ny fomba fiasan'ny Dreame T20 ary raha tena mendrika izany raha oharina amin'ireo mpifaninana azo alaina amin'ny vidiny mitovy.
1 Fitaovana sy endrika, marika ny trano
3 Autonomy sy kojakoja
4 Mampiasà traikefa
Fitaovana sy endrika, marika ny trano
Dreame dia nahafantatra ny mampiavaka azy kely amin'ireo mpitarika hafa ao amin'ny sehatra amin'ny fanolorana ny endrika sy ny fitaovana nofidiny manokana toy ny efa hitantsika tamin'ny vokatra teo aloha. Ity Dreame T20 ity dia tsy mety ho latsa-danja, mpanadio banga izay vita amin'ny plastika manjelanjelatra ivelany misy loko volondavenona isan-karazany, raha ny kojakoja dia vita amin'ny plastika matte graphite grey ary ny fononteny metaly amin'ny aluminium mena. Izany rehetra izany dia manome antsika vokatra somary maivana, izay tsy mihoatra ny 1,70 grama.
Vidio amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Amazon.
Mahavariana sy mahatohitra, mihoatra noho izay azo rehareha amin'ny fanamboarana azy. Ny entana dia toa mitambatra tsara, ary mety Mariho fa manana efijery LED izahay ao ambadika izay manome fampahalalana ampy ho an'ny fampiasana azy, ary koa ny bokotra hitantana ny haavon'ny hery samihafa sy ny hidin-trano, mba tsy hifanerasera amin'ny écran tsy nahy. Ny rafitra "action" an'ny vacuum cleaner dia amin'ny alalan'ny trigger, hita eo amin'ny tahony, ka rehefa manindry azy ihany no miasa ny mpanadio. Na dia ho an'ny mpampiasa sasany aza dia tsy mahazo aina kokoa izany, izaho manokana dia aleoko kokoa noho ny on / off satria afaka mitantana tsara kokoa ny fahefana isika ary indrindra ny fizakan-tena.
Maro aminareo no tsy miraharaha afa-tsy ny fahefana, ka hasehonay ho iray amin'ireo angona voalohany. Ao amin'ny atolotry ny Dreame ho "mode turbo" hahazo hatramin'ny 25.000 pascal isika, izany dia ambony lavitra noho ny salan'isa eo anelanelan'ny 17.000 sy 22.000 izay matetika atolotry ny mpanadio banga ao anatin'io vidiny io. Amin'ny lafiny iray, manana sivana avo lenta isika, izay mahazatra ihany koa amin'ity karazana vokatra ity, eny, tsy mora ny manolo na manadio toy ny mitranga amin'ny dikan-teny teo aloha (ary mora kokoa) amin'ny tànana Dreame. mpanadio banga, mieritreritra aho fa mba hiarovana ny fivoahana.
Raha ny petra-bola, dia manolotra hatramin'ny 600 milliliters, petra-bola izay, satria efa mariky ny marika, dia misokatra amin'ny fanindriana bokotra fotsiny ary manome antsika ny fahafahana mametraka mora foana ny sisa. Ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra amin'ny mpanadio banga Dreame dia ny fanamorana ny fanalana ireo fiara mifono vy ireo sy ny fahafahany, izay efa lazaiko aminao fa somary avo kokoa noho ny an'ny marika mihitsy aza.
Autonomy sy kojakoja
Hiresaka momba ny batterieny isika izao, manana 3.000 mAh isika amin'ny fitambarany fa ny fiampangana feno dia haharitra adiny telo eo ho eo raha mampiasa ny charger izay tafiditra ao anaty fonosana, na mampiasa ny fiantsonana na tsia. Amiko manokana dia manoro hevitra foana aho mba ho vonona ny fiantsonan'ny chargé satria sady manamora ny hetsika mampifandray azy io na ny fitahirizana ireo kojakoja tsy tambo isaina misy. Amin'ny fitambarany dia miantoka antsika 70 minitra ny fahaleovan-tena amin'ny fomba "eco", izay mihena be amin'ny fomba "turbo". Na izany na tsy izany, nahazo vokatra tena akaiky ny fizakan-tena nomen'i Dreame izahay.
Raha ny kojakoja, ny votoatin'ny boaty an'ity Dreame T20 ity dia tsy isalasalana fa mahagaga noho ny tolotra midadasika, izao ihany no ananantsika:
Dreame T20 mpanadio banga
Tube metaly fanitarana
Smart Adaptive Upholstery Brush
Fametrahana ny fototra misy screws tafiditra
Wide precision nozzle
Tube flexible ho an'ny zorony
Tsy isalasalana fa tsy ho diso na inona na inona ianao miaraka amin'ity Dreame T20 ity ho fitaovana, Lavitra be ny marika "ambony" hafa, izay tsy maintsy vidiana misaraka ny ankamaroany.
Nandritra ny fampiasana isan'andro dia tsara ny fahatsapanay, indrindra amin'ny tabataba, izay tsy mihoatra ny 73 decibels amin'ny "turbo" mode, ny Dreame ry zalahy dia niasa tsara tamin'ny olana momba ny tabataba ary mampiseho izany, indrindra raha toa isika ka mandinika ny zava-misy fa tsy manimba ny potency. Amin'ny ampahany, Ny fanomezan'izy ireo antsika ny bateria azo esorina dia antoka, na amin'ny alàlan'ny fanoloana, na amin'ny maha-azontsika manamboatra azy ireo ary tsy mila manary tanteraka ny vokatra isika satria simba ny sela sasany amin'ny bateria lithium.
Malahelo aho fa ny fitaovana kifafa dia misy jiro LED kely izay manampy antsika hahita tsara kokoa ny loto, raha tsy izany, ny zava-misy dia ahitana ny Smart Adaptive borosy Tena ilaina ho antsika izay manana biby fiompy izany satria manampy antsika hanesorana ny volo eo amin'ny sofa ary na amin'ny akanjontsika aza raha tiantsika izany.
Amin'ny lafiny kojakoja, ity Dreame T20 ity dia feno tanteraka ary ny marina dia tsy manadino na inona na inona, vokatra saika boribory amin'ity lafiny ity. Amin'ny ampahany, kanto ny loko ary ambonin'ny zavatra rehetra mateza.
Miatrika vokatra izahay na dia tsy mora aza, Manodidina ny 299 euros izany arakaraka ny fivarotana, manolotra safidy tsy misy farany ho antsika, iray amin'ireo fizakan-tena tsara indrindra eny an-tsena ary mazava ho azy fa ny antoka an'i Dreame, orinasa tranainy manana laza malaza amin'ny sehatra. Mazava ho azy fa tsy ny "entry range", fa ireo izay mazava fa mitady ity karazana vokatra ity dia hahita ny Dreame T20 ho mpiara-miasa tena tsara, hitanay fa vokatra somary boribory izy io ary tianay hizara. miaraka aminao izany.
Navoaka tamin'ny: Novambra 22 avy amin'ny 2021
Fanovana farany: Novambra 22 avy amin'ny 2021
Karazana fitaovana isan-karazany
Tena mitovy amin'ny dikan-teny hafa amin'ny Dreame
Tsy misy LED amin'ny kifafa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Dreame T20, mpanadio banga tànana avo lenta sy mahomby [Fandinihana]
Black Friday: Ny tolotra tsara indrindra amin'ny automation an-trano sy ny feo
Smartmi Air Purifier, mpanadio tena mahay ary misy sivana H13